४६ औ अमेरिकी राष्ट्रपति जोय बाईडेनद्धारा कार्यभार ग्रहण, ट्रम्पद्धारा सपथ ग्रहण बहिस्कार – khabarmala.com
b s ताजा समाचार प्रोफाईल स्टोरी राजनीति
४६ औ अमेरिकी राष्ट्रपति जोय बाईडेनद्धारा कार्यभार ग्रहण, ट्रम्पद्धारा सपथ ग्रहण बहिस्कार
Newportalmala ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१	No Comments
अमेरिका, संसारकै शक्तिशाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको देश अमेरिकामा आज राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जोय बाईडेनले कार्यभार सम्हालेका छन । अमेरिकी ईतिहासमा संसारकै सुरक्षित मानिएको अमेरिकी संसदमा निर्वतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उक्साहटमा आक्रमण भएपछि पहिलो पटक सुरक्षा घेराबीच सपथ ग्रहण सम्पन्न भयो । ४६ औ राष्ट्रपति बाइडेनले सपथग्रहणपछि अमेरिका र प्रजातन्त्रको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सम्बोधनमा उनले भने – आजको यो दिन अमेरिकाको हो, लोकतन्त्रको दिन हो, यो इतिहास र आशाको दिन हो ।’ ‘अमेरिकाको धेरै चोटि धेरै परीक्षा भयो र यो चुनौतिहरूको साथ उभिएको छ । आजले हामी एक जना उम्मेदवारको जीत होइन, प्रजातन्त्रको जीत मनाइरहेका छौं ।’
बाइडेन अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति, कमला ह्यारिस पहिलो महिला उपराष्ट्रपति एक महिनाअघि निर्वार्चित भएका हुन । जो बाइडेनले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिस जोन रोबर्टसबाट बाइबललाई साक्षी राखेर सपथ लिएका हुन् । बाइडेनले शपथ लिँदा एक सय २८ वर्ष पुरानो बाइबल छोएका थिए । सन् १९८३ देखि सो बाइबल बाइडेन परिवारसँगै छ । सन् २००९ र २०१३ मा लगातार दुईपटक उपराष्ट्रतिमा चुनिँदा उनले त्यही बाइबलमाथि हात राख्दै शपथ लिएको जनाईएको छ ।
विगतमा राष्ट्रपतिले नै कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने परम्परालाई ट्रम्पले वेवास्था गर्दै हस्तान्तरण कार्यक्रम शुरु हुनुअगावै ट्रम्पले ह्वाईट हाउस छाडे । अमेरिकी ईतिहासमा एक सय ५२ बर्ष अघि एन्ड्रयू जोन्सनले पदभार कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन । यस अघि तीन जना राष्ट्रपति पदभार कायक्रममा सहभागी भएका छैनन । ७८ वर्ष पार गरिसकेका बाईडेन अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपति एक महिना अघि नै तय भए पनि अमेरिकाको परम्पराअनुसार आज जनवरी २० तारिक शपथ लिने गरिन्छ । अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा आफै सरकार प्रमुख भएर चुनावी परिणाम अस्वीकार गर्दै सत्ता छाड्न अनाकानी गरेका डोनाल्ड ट्रम्प सामान्य बिदाइ प्रक्रियाबाट घर फर्के । ट्रेनबाट ह्वाईट हाउस आएर शपथ लिने तयारी गरेका बाईडेनलाई सुरक्षाका कारण पुरानै परम्परागत शैलीमा आएर सपथ ग्रहण गरे ।
बाराक ओबामाको दुई कार्यकाल (आठ वर्ष)का उपराष्ट्रपति र तीन दशक सिनेटमा काम गरेका बाइडेन अमेरिकी नीति, चाल र आफ्नो जिम्मेवारीमा अनुभवी र स्पष्ट छन् ।
सन् १९८७ र २००८ मा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका बाइडेनले आफ्नै दलभित्र समर्थन जुटाउन नसकेपछि पछि हटेका थिए । सपथग्रहणपछि विशेष सम्बोधन गर्दै अमेरिकाका ४६ औं राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू सबै अमेरिकनहरुको राष्ट्रपति हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विश्व समुदायका लागि निकै कौतुहलको रुपमा उदाएका बाईडेनका लागि आगामी दिन त्यति सजिलो छैन । एकातिर निर्वतमान राष्ट्रपति ट्रम्पले विगारेको विश्वसामु अमेरिकी साँखलाई पुर्नस्थापित गर्ने र कोरोनाबाट उब्जेको अर्थतन्त्र र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो । ह्वाईट हाउसमा पद हस्तान्तरण प्रक्रिया चलिरहँदा विश्वका अन्य शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुले बाईडेनलाई अमेरिकी साँख पुरानै अवस्थामा फर्काउन भन्दै शुभकामना दिई रहेका छन । तर अमेरिकी भुमिका ट्रम्पले छाडेर गएको गहिरो अमेरिकी जनताबीचको मतभेदलाई समान गराउन पनि उत्तिकै पापड पेल्नु पर्नेछ । किनकी राजनीतिका पण्डितहरुका अनुसार अमेरिकमा ट्रम्पले जनताबीच निकै ठुलो विभाजन गराएका छन ।
राष्ट्रपति बाईडेनको पहिलो निर्णयहरु
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक सहायता सम्बन्धि तीनवटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर कार्यकालको पहिलो हस्ताक्षर गरे । उनले बेलुकासम्म बाइडेनले १७ वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने समाचार एजेन्सीहरुले जानएको छ ।
बाइडेन संघीय भवन र भूभागहरुमा मास्क अनिवार्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा यात्रा गर्दा पनि मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै बाइडेनले हस्ताक्षर गरेको अर्को कार्यकारी आदेश कम सुविधा पाइरहेको समुदायका लागि सहयोग बढाउने सन्दर्भको रहेको छ भने अर्को कार्यकारी आदेश पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुन समावेश हुने रहेको छ । जुन पेरिस संझौतालाई ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरेका थिए ।
बाइडेनले घोषणा गरेको अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने बिल पारित गराउनका लागि संसदसमक्ष पठाउने अपेक्षा गरिएको छ । आजै बाइडेनले संघीय विद्यार्थी ऋण भएका अमेरिकन विद्यार्थीको ऋण पेमेन्ट र ब्याज स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नेछन् । डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि आजै बाइडेनले हटाउने जनाइएको छ । बाईडेनलाई दुवै सदनमा काम गर्न अबको दिनमा सजिलो हुने भएकोले उनले घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा आउनेछन । दुवै सदन सिनेट र कँग्रेस दुवैमा उनको पार्टी डेमोक्र्याटको बहुमत पुग्नेछ ।
ट्रम्प कहाँ गए ?
आफ्ना उत्तराधिकारी बाइडेनलाई ह्वाइटहाउसमा स्वागत नगरी फ्लोरिडा उडेका ट्रम्पले ऐतिहासिक संस्कार विधि समेत लत्याएका छन् । राष्ट्रपति पद छोड्ने अन्तिम समयमा उनले ७३ जनालाई क्षमादान दिएका छन् । ह्वाईट हाउसमा पदहस्तान्तरण शुरु हुनु केहि अघि ट्रम्प एयर फोर्स वानमा चढेर फ्लोरिडामा रहेको आफ्नो निजी रिसोर्ट मार ए लागो गए । उनलाई सामान्य विदाई मात्र भयो । विगतमा पार्टीका नेता तथा राष्ट्रपतिले विदाई गर्ने परम्परा भए पछि सो विदाई समारोहमा कोही गएनन । न्युयोर्कबाट फ्लोरिडामा बसाई सराई गरिसकेका उनले त्यहाँ रहँदा आफ्ना ह्वाइटहाउसका केही सहयोगीहरुलाई पनि व्यक्तिगत कर्मचारीका रुपमा सँगै राख्ने जनाइएको छ ।
कार्यकालको अन्तिम दिन बिदाइ सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको बचाउ गरेका थिए । ‘अमेरिका कातर आत्माहरूको देश होइन, जसलाई उनीहरूले विमति राख्नेबाट जोगाउन वा सुरक्षित पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी सधै संसारका लगि आशा, प्रकाश तथा गौरवको भूमि हौं र भविष्यमा पनि रहिरहनुपर्छ ।’
आगामी प्रशासनबारे समेत उनले केहि सुझाव दिएका छन् । ‘नयाँ प्रशासन अमेरिकालाई सुरक्षित र सम्पन्न तुल्याइराख्न सफल होस् भन्ने हाम्रो कामना छ,’ उनले भने । आफू निर्वाचित हुनुको उद्देश्य पूर्णरुपमा प्राप्त भएको ट्रम्पको दाबी छ । उनले भने, ‘हामी जे गर्न आएका थियौं त्यो भयो । सबभन्दा मुख्य कुरा हामीले अमेरिकामा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ भन्ने मान्यता पुनःस्थापित गर्न सफल भयौं ।’
सम्बोधनको अन्त्यमा ट्रम्पले आफ्नो आन्दोलन सुरु भएको बताए । ‘जब म बुधबार नयाँ प्रशासनलाई सत्ताको बागडोर सुम्पदैंछु, म चाहन्छु तपाईंहरूले बुझ्नुहोस की हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदैछ ।’
नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथमा सहभागी नहुने ट्रम्पमात्र पहिलो राष्ट्रपति भने होइनन् । जोन आडम्स, जोन क्वीन्सी आडम्स र एन्ड्रयु जोन्सन पनि नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथमा सहभागी भएका थिएनन् । ट्रम्पलाई जस्तै जोन्सनलाई पनि महाभियोग लगाइएको थियो । गत बुधबार अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाले ट्रम्पलाई महाभियोग लगाइसकेको छ भने सनेटबाट पास हुन बाँकी छ । ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुईपटकसम्म महाभियोग लगाइएका पहिलो राष्ट्रपति हुन् । उनलाई शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग लगाइएको थियो । तर उनले सिनेटबाट भने उन्मुक्ति पाएका थिए ।
सपथ ग्रहणमा को को सहभागी भए ?
ट्रम्प सहभागी नभएपनि सपथ ग्रहण कार्यक्रममा रिपव्लिकनका सबै बरिष्ठ नेता तथा उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र उनकी पत्नी करेन पेन्स भने सहभागी भए । पुर्वराष्ट्रपतिहरु बराक ओबामा, बिल क्लिन्टन र जर्ज डब्ल्यु बुस पनि सपत्नी सपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएका थिए । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ९६ बर्षका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर भने सहभागी नहुने सुचना दिएका थिए ।
जनवरी ६ मा भएको दंगाफसादपछि बाइडेनको सपथग्रहण समारोहलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा बनाइएको थियो । वासिंटन डिसीमा संकटकाल लगाइएको छ भने २० हजार सेना परिचालन गरिएको थियो । सपथग्रहण र त्यसको सेरोफेरोमा सबै ५० वटा राज्य र वासिंटन डिसीमा सशस्त्र प्रदर्शन हुनसक्ने भन्दै उच्च सुरक्षा शतर्कता अपनाइएको थियो । अमेरिकी ईतिहासमा यस्ता घटना विरलै हुने भन्दै ट्रम्प र उनको योजनामा भएको भनिएको घटनालाई विश्वभरबाट आलोचना भईरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो भए लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रमण गरी तानाशाह बन्न गरेको प्रयासहरु त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले असफल तुल्याउँछ भन्ने कुरा यसपटक अमेरिकी भुमिका पुष्टि भएको छ । यो घटनाको एउटै पाठ छ– लोकतन्त्रका संस्था बलिया भए भने निर्वाचनबाट आएर तानाशाह बन्न खोज्ने नेताहरूले एक कार्यकाल बिगारे पनि सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अमेरिकी घटनाबाट पुष्टि भएको छ ।
ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुईपटक महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति भए र उनले प्रत्येक वर्ष पाउने दुई लाख डलर निवृत्तिभरण, १० लाख डलर यातायात खर्च र अन्य सुविधा खोसिनेछ । त्यति मात्र होइन, भविष्यमा उनले कहिल्यै सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा समेत बस्न पाउनेछैनन् । उनले २०२४ मा फेरी राष्ट्रपतिमा उठ्ने योजनामा पनि ठेस पुगेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनको मन्त्रिपरिषदलाई अमेरिकी ईतिहासकै समावेसी भनिएको छ । जसमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससहित १५ वटा विभिन्न कार्यकारी विभागका प्रमुखहरु हुनेछन् । त्यो बाहेक अन्य केही पदहरु पनि मन्त्रिपरिषद् स्तरका हुन् । कमला हयारिससहितका २६ मन्त्रिपरिषद् स्तरका पदमा १२ जना महिला रहेका छन् । बाइडेनको मन्त्रिपरिषद्मा कमला ह्यारिससहित ६ जना अश्वेत, एकजना आदिवासी अमेरिकन, ४ जना ल्याटिनो, २ जना एसियन, १२ जना श्वेत अमेरिकन रहेका छन् ।
Previous Previous post: ज्योतिसको नजरमा गूरु र शनीको व्याख्या :आगामी नोभेम्बरसम्म किन अझै डरलाग्दो समय छ ?
Next Next post: तीन डेमोक्रेटिक सिनेटरहरुबाट सपथग्रहण, अब सिनेटमा डेमोक्र्याट्सको बहुमत
एनआरएन अमेरिका विघठनको संघारमा, आईसिसिको निर्णय लत्याए खारेज हुने ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१
कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि परिवर्तन हुने ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१
पत्रकार महासंघ अध्यक्षमा पोखरेल प्यानल विजयी : कसको मत कति ? ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर: नयाँ कोरोना ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१
चारमन्त्रिको सांसद र मन्त्रिपद खुस्कियो ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१
धनाढ्यको सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान खस्कियो,विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस ७ माघ २०७७, बुधबार २३:३१